Akụkọ Bible: Nwata Nwoke Ụra Buuru - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
EWOO! Gịnị na-eme n’ebe a? Nwata nwoke ahụ nke dina ala, ò merụrụ nnukwu ahụ́? Lee! otu n’ime ndị si n’ụlọ ahụ na-apụta bụ Pọl! Ị̀ na-ahụkwa Timoti n’ebe ahụ? Nwata nwoke ahụ ò si na windo daa?
Ee, nke ahụ bụ nnọọ ihe merenụ. Pọl nọ na-agwa ndị na-eso ụzọ okwu na Troas. Ọ ma na ọ gaghị ahụ ha ọzọ ruo ogologo oge, n’ihi na ọ ga-aba n’ụgbọ mmiri echi wee mee njem. N’ihi ya, ọ nọgidere na-agwa ha okwu ruo n’etiti abalị.
Nwata nwoke a a na-akpọ Yutikọs nọdụrụ ala na windo, ụra wee buru ya. O si na windo ụlọ elu dị okpukpu abụọ daa! Ị hụzielanụ ihe mere ndị a ji nwee mwute. Mgbe ndị ikom ahụ kulitere nwata nwoke ahụ, ihe ha na-atụ ụjọ ya emeela. Ọ nwụwo!
Mgbe Pọl hụrụ na nwatakịrị ahụ anwụwo, o dinaara n’ahụ́ ya, makụọ ya. O wee sị ha: ‘Unu echegbula onwe unu. Ọ dịwo ya mma!’ Nke ahụ bụkwa eziokwu! Ọ bụ ọrụ ebube! Pọl emewo ka ọ dị ndụ ọzọ! Ìgwè mmadụ ahụ wee jupụta n’oké ọṅụ.
Ha niile rigooro n’ụlọ elu ahụ ọzọ, wee rie ihe. Pọl nọgidere na-ekwu okwu ruo mgbe chi bọrọ. Ma Yutikọs arahụghị ụra ọzọ! Mgbe e mesịrị, Pọl na Timoti na ndị so ha eme njem ahụ bara n’ụgbọ mmiri. Ị̀ ma ebe ha na-eje?
Pọl ka mesịrị nnọọ njem ozi ọma nke atọ ya, ọ na-alakwa ala. Na njem a, Pọl anọwo afọ atọ n’obodo Efesọs naanị. N’ihi ya, ọ nọrọ ọdụ na njem nke a karịa njem nke abụọ ya.
Mgbe ha hapụrụ Troas, ụgbọ ha kwụsịrị nwa oge na Militọs. Ebe ọ bụ na Efesọs dị naanị kilomita ole na ole, Pọl ziri ozi ka a kpọọ ndị okenye nke ọgbakọ Efesọs ka ha bịa Militọs ka ọ gwa ha okwu nke ikpeazụ. Ma mgbe oge ruru ka ụgbọ ahụ pụọ, o wutere ndị okenye ahụ nke ukwuu ịhụ ka Pọl na-ala!
N’ikpeazụ, ụgbọ mmiri ahụ bịaruru Sesaria. Mgbe Pọl nọ n’ebe ahụ n’ụlọ Filip onye na-eso ụzọ, Agabọs onye amụma dọrọ Pọl aka ná ntị. O kwuru na a ga-atụ Pọl mkpọrọ ma ọ gaa Jeruselem. N’eziokwu eziokwu, ọ bụ ihe mere. Mgbe ọ nọsịrị afọ abụọ n’ụlọ mkpọrọ na Sesaria, e zigara Pọl na Rom ka e kpee ya ikpe n’ihu Siza, onye ọchịchị Rom. Ka anyị lee ihe mere mgbe ọ na-eje Rom.
Ọrụ isi 19 ruo isi 26.
Na foto a, ònye bụ nwata nwoke ahụ dina n’ala, gịnịkwa mere ya?
Gịnị ka Pọl mere mgbe ọ hụrụ na nwata nwoke ahụ anwụọla?
Olee ebe Pọl, Timoti, na ndị ha na ha so na-eme njem na-aga, gịnịkwa mere mgbe ha kwụsịrị na Militọs?
Gịnị ka Agabọs onye amụma dọrọ Pọl aka ná ntị banyere ya, oleekwa otú ihe ahụ onye amụma ahụ kwuru si mezuo?
Gụọ Ọrụ Ndịozi 20:7-38.
Olee otú anyị pụrụ isi nọgide na-adị “ọcha n’ebe ọbara mmadụ niile dị,” dị ka Pọl si kwuo n’Ọrụ Ndịozi 20:26, 27? (Ezik. 33:8; Ọrụ 18:6, 7)
N’ihi gịnị ka ndị okenye ji kwesị ịdị “na-ejidesi okwu ahụ kwesịrị ntụkwasị obi aka ike” mgbe ha na-ezi ihe? (Ọrụ 20:17, 29, 30; Taị. 1:7-9; 2 Tim. 1:13)
Gụọ Ọrụ Ndịozi 26:24-32.
Olee otú Pọl si jiri ọbụbụ ọ bụ onye Rom mee ihe n’ịrụzu ọrụ nkwusa Jizọs nyere ya? (Ọrụ 9:15; 16:37, 38; 25:11, 12; 26:32; Luk 21:12, 13)